Abazali bavale amasango esikole bebhikishela inkohlakalo | Scrolla Izindaba
Abazali bavale amasango esikole bebhikishela inkohlakalo
Abazali babafundi base-Kgola Ka Leleme Secondary School bavale amasango esikole, bashiya abafundi kanye nothisha besele dengwane ngaphandle kwamagceke esikole ngoba bethi balwa nenkohlakalo.
Babhikishe ngoLwesibili kulesi sikole esisesigodini sase-Ga-Sekgopo ngaphandle kwase-Modjadjiskloof e-Limpopo, befuna ukuthi kususwe uthishomkhulu esikhundleni kanye ne-School Governing Body (SGB), ngoba besolwa ngenkohlakalo.
Bathe la malungu e-SGB bese kuphele iminyaka engaphezu kwengama-20 ekhona engashintshwa kanti futhi bebengasisebenzeli isikole kodwa bebenzela izifiso zabo.
Bangeze ngokuthi abanye babo bangamalungu e-SGB akwesinye isikole.
Umhlali wakule ndawo uSipho Moagi oneminyaka engama-36 uthe, kunezinsolo zokuthi isikole siboleke imali kwesinye sikole, kanye nokuthi le mali idluliselwe “kuma-akhawunti asebhange amalungu e-SGB hhayi i-akhawunti yasebhange yesikole”.
“Sifuna ukubona izincwadi zezimali zesikole ukuze zicwaningwe,” kusho yena.
UMoagi uthe, bathathe isinqumo sokusivala isikole njengoba bengakutholanga abakufunayo ngemuva kokuhambisa imemorandamu kubaphathi besikole ngoLwesihlanu olwedlule.
Ngonyaka odlule isikole sathola izinga lokuphasa likamatikuletsheni elingamaphesenti angama-25, okwacasula abazali ukuthi isikole asiqhubi kahle.
“Sikholwa ukuthi amalungu e-SGB kanye nothishomkhulu abenzi lutho ukwenza ushintsho,” kusho uMoagi. Bathe isikole sabo sizohlala sivaliwe kuze kube kuhlangatshezwana nezimfuno zabo.
UTumelo Marutha oneminyaka eyi-16 ofunda kulesi sikole uthe, umbhikisho uyababambezela. “Siyathemba ukuthi izinkinga zabo zizoxazululwa ngokushesha ukuze sikwazi ukubuyela esikoleni. Asikwazi ukuphuthwa yisikole njengoba lo nyaka wezifundo ubuvele ubambezelekile,” kusho uTumelo.
Okhulumela uMnyango wezeMfundo e-Limpopo uTidimalo Chuene uthe, umphathi wesekethe uvakashele isikole ukuyoxoxisana nabazali ukuze abafundi babuyele esikoleni.
Uthe, bakhathazekile ngombhikisho futhi bazosiqapha isimo isonto lonke.
“Kumele sazi ukuthi yize siwazisa amalungelo abazali okuveza ukukhathazeka ekusebenzeni kwesikole, lokhu akumele kwenziwe ngokucekela phansi imfundo yabafundi,” kusho uChuene.